အသီးနာ - ဝီကီပီးဒီးယား
အသီးနာ (သို့) အသီးနီ (အင်္ဂလိပ်: Athena or Athene) သည် ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ နတ်ဘုရားမတစ်ဦးဖြစ်၍ ဂုဏ်ရည်ပြအမည်မှာ ပါးလပ်စ် (Pallas) ဖြစ်ကာ ဉာဏ်ပညာ၊ လက်မှုအတတ်၊ စစ်ရေးစစ်ရာနှင့် သက်ဆိုင်သောသူဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ရောမနတ်ဘုရားမ မစ်နားဗာနှင့် ရောနှောပေါင်းစပ်သွားသည်။ ဂရိနယ်မြေတခွင်တွင် မြို့များစွာတို့၏ အဓိက စောင့်ရှောက်သော နတ်ဘုရားမအဖြစ် သတ်မှတ်ယူဆခဲ့ကြ၍ အထူးသဖြင့် အေသင်မြို့တော်၏ စောင့်ရှောက်သူဖြစ်ကာ သူမ၏ အမည်သည် ထိုမြို့ကို အစွဲပြု၍ ရလာနိုင်ချေများသည်။တမ်းပလိတ်:Snf အနုပညာလက်ရာများတွင် စစ်ဦးထုပ်နှင့် လှံရှည်ကိုင်စွဲထားသော ရုပ်ပုံဖြင့် ဖော်ပြကြသည်။ သူမ၏ အဓိက အမှတ်လက္ခဏများမှာ ဇီးကွက်၊ သံလွင်ပင်၊ မြွေနှင့် ဂေါဂန်နိုင်းယန် (မြွေများရစ်ခွေသော ဦးခေါင်း) တို့ဖြစ်၏။
ဉာဏ်ပညာ၊ သံလွင်ပင်၊ ရက်ကန်းရက်ခြင်း၊ တိုက်ပွဲဗျူဟာ ဆိုင်ရာ နတ်ဘုရားမ
လူဗာပြတိုက်ရှိ မာတေးယီ အသီးနာ (Mattei Athena)။ ဘီစီ (၄) ရာစု ဂရိမူရင်း ပြီးနောက် ဘီစီ/အေဒီ ၁ ရာစုမှ ရောမတို့၏ မိတ္တူပွားရုပ်တု။
ဇီးကွက်၊ သံလွင်ပင်၊ မြွေ၊ ဆိတ်သားရေဒိုင်း၊ ချပ်ဝတ်တန်ဆာ၊ စစ်ပွဲဦးထုပ်၊ လှံ၊ ဂေါဂန်နိုင်းယန် (မြွေများရစ်ခွေသော ဦးခေါင်း)
သီယိုဂန်နီကဗျာတွင် ဇုစ် နှင့် မေးတီးစ်[မှတ်စု ၁]
အီးယကပ်စ်၊ အန်းဂဲလော့စ်၊ အဲဖရာဒိုက်တီ၊ အပေါလို၊ အဲရီးဇ်၊ အားတစ်မစ်၊ ဒိုင်ယာနိုက်ဆပ်စ်၊ အင်နိုင်းယို၊ အဲရစ်၊ အားဆာ၊ ဟီးဘီး၊ ထရွိုင်မှ ဟဲလင်၊ ဟစ်ဖီးစတပ်စ်၊ ဟဲရာကလီးဇ်၊ ဟားမီးဇ်၊ မိုင်းနော့စ်၊ ပန်ဒိုင်းယာ၊ ပါဆက်ဖန်နီ၊ ပါးဆီးယပ်စ်၊ ရာဒါမန်သပ်စ်၊ ဂရေးဆစ်၊ ဟောရီး၊ လိုက်တီး၊ မြူးဇစ်၊ မွိုင်ရီး
မရှိ၊ မွေးစားသားမှာ 'အရစ်သိုးနီးယပ်စ်'
ဤဆောင်းပါးတွင် အထူးသီးသန့် အက္ခရာများ ပါဝင်သည်။ သင့်တော်သော ပုံဖော်တင်ဆက်သည့် ထောက်ကူစနစ် မရှိပါက သင်သည် မေးခွန်းသင်္ကေတ၊ လေးထောင့်ကွက် (သို့) အခြား သင်္ကေတများကို တွေ့မြင်နေနိုင်သည်။
အီးဂျီယန် နန်းတော်နတ်သမီး ဇစ်မြစ်မှ အသီးနာသည် မြို့တော်နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သူမကို ပေါလိယပ်စ် (Polias) နှင့် ပေါလိယိုးကော့စ် (Poliouchos) (စကားလုံးနှစ်ခုစလုံးမှာ polis (မြို့ပြနိုင်ငံ) မှ ဆင်းသက်လာသည်။) အဖြစ်လည်း သိရှိကြပြီး သူမ၏ ဘုရားကျောင်းများမှာ အေသင်မြို့အလယ်မှ အခရောပါလစ်ခံတပ် တောင်ထိပ်တွင် တည်ရှိသည်။ အခြားများစွာသော ဘုရားကျောင်းဆောင်များ၊ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးများနှင့်အတူ ယင်းတောင်ထိပ်မှ 'ပါးသနန်'ဘုရားကျောင်းဆောင်သည် သူမကို ရည်ရွယ်ပူဇော်သည့် ကျောင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ လက်မှုအတတ်ပညာ၊ ရက်ကန်းရက်ခြင်းဆိုင်ရာ နတ်ဘုရားမအဖြစ် အသီးနာကို 'အားဂန်နီ' (Ergane) အဖြစ်လည်း သိရှိကြ၏။ စစ်ပွဲနတ်ဘုရားမဖြစ်ပြီး ရှေ့တန်းမှနေ၍ တိုက်ပွဲဆင်သူ (Athena Promachos) အဖြစ် စစ်သည်များကို ဦးဆောသ်သူဟူ၍ ယုံကြည်ကြသည်။ အေသင်မြို့က သူမ၏ အဓိကပွဲသည် 'ပယ်နသိနေယာ' ပွဲတော်ဖြစ်ပြီး အဲတစ်(အေသင်) ပြက္ခဒိန် Hekatombaion လ (ဇူလိင်/ဩဂုတ်) တွင် ကျင်းပကြ၍ အေသင်ပြက္ခဒိန်၌ အရေးကြီးဆုံးပွဲတော်လည်း ဖြစ်ပေသည်။
ဂရိဒဏ္ဍာရီ၌ အသီးနာသည် ဖခင် ဇုစ် ဦးခေါင်းမှ မွေးဖွားလာသည်ဟု ယူဆကြလေသည်။ အေသင်၏ မြို့တည်ဒဏ္ဍာရီတွင် အသီးနာသည် ပိုဆိုက်ဒန်ကို မြို့စောင့်ရှောက်သူအကြီးအကဲနေရာ ပြိုင်ပွဲ၌ ပထမဆုံး သံလွင်ပင်ကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အသီးနာ ပါသနော့စ် (အပျိုစဉ် အသီးနာ) အမည်ဖြင့်လည်း ထင်ရှားသည်။ တစ်ခုသော ရှေးဟောင်း အဲတစ်ဒဏ္ဍာရီတွင် ဟစ်ဖီးစတပ်စ်သည် သူမကိုညအဓမ္မကျင့်ရန် ကြို့းစားသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ ရလဒ်အားဖြင့် ဂိုင်ယာမှ အရစ်သိုးနီးယပ်စ်ကို မွေးဖွားခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အရစ်သိုးနီးယပ်စ်သည် အရေးပါသော အေသင်မြို့တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်၏။ အသီးနာသည် သူရဲကောင်းဆန်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျော်ကြားသော နတ်ဘုရားမတစ်ဦးဖြစ်ရာ ပါးဆီးယပ်စ၊ ဟဲရာကလီးဇ်၊ ဘလဲ့ရာဖန်၊ နှင့် ဂျေးဆန် တို့ကို အကူအညီပေးခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အက်ဖရာဒိုက်တီနှင့် ဟဲ့ရာ တို့နှင့်တကွ အသီးနာသည် ထရိုဂျန်စစ်ပွဲကို ဖြစ်စေခဲ့သည် ကမ္ဘာ့ရန်ဖက် နတ်ဘုရားမ သုံးပါးထဲမှ တစ်ပါးဖြစ်လေသည်။
အိလိယဒ်ကဗျာရှည်တွင် သူမ၏ အခန်းကဏ္ဍများစွာရှိ၍ အခီးယာဒေသမှ သူများကို ကူညီသည်ဟု ဆိုကာ အောဒဆီကဗျာတွင် အိုဒစ်ဆီးယပ်စ်၏ အကြံပေးဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။ ရောမကဗျာဆရာ အောဗစ်၏ နောက်ပိုင်းအရေးအသားများတွင် အသီးနာသည် လူသားအမျိုးသမီး အဲရာ့ခ်နီနှင့် ရက်ကန်းပြိုင်ပွဲတစ်ခု ယှဉ်ပြိုင်ပြီးနောက် အဲရာ့ခ်နီကို ပထမဆုံး ပင့်ကူအသွင်ပြောင်းခဲ့လေသည်။ ကဗျာဆရာ အောဗစ်က ဆက်လက်၍ ပိုဆိုက်ဒန်က မစ်ဒယူးဆာ (မဒူဆာ) က သူမ၏ ဘုရားကျောင်းတွင် အဓမ္မကျင့်ပြီးနောက် မစ်ဒယူးဆာကို မြွေများရစ်ခွေနေသောခေါင်း မည်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ခေတ်ဆန်းချိန်ကာလ (Renaissance) ကတည်းက အသီးနာသည် ဉာဏ်ပညာ၊ အနုပညာနှင့် ဂန္ထဝင်(စာပေ)သင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပြယုတ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်း ပန်ချီဆရာများ၊ ခိုင်းနှိုင်းတင်စားသူများက အများအားဖြင့် အသီးနာကို လွတ်လပ်မှု၊ ဒီမိုကရေစီ ၏ အမှတ်သညာအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
↑ In other traditions, Athena's father is sometimes listed as Pallas the Giant, Cyclops Brontes, or Itonos the Daktyl.
↑ Kerényi 1951, pp. 121–122.
↑ L. Day 1999, p. 39.
↑ Inc၊ Merriam-Webster (1995)။ Merriam-Webster's Encyclopedia of Literature။ Merriam-Webster။ p. 81]။ ISBN 9780877790426။
↑ Deacy & Villing 2001.
Kerényi၊ Karl (1951)၊ The Gods of the Greeks၊ London, England: Thames and Hudson၊ ISBN 978-0-500-27048-6
L. Day၊ Peggy (1999a)၊ "Anat"၊ in Toorn၊ Karel van der; Becking၊ Bob; Horst၊ Pieter Willem van der (eds.)၊ Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd ed.၊ Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing၊ pp. 36–39
Deacy၊ Susan; Villing၊ Alexandra (2001)၊ Athena in the Classical World၊ Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသီးနာ&oldid=622584" မှ ရယူရန်
၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။